Caafimaadka iyo daryeelka | Samfunnskunnskap.no
Yaa masuul ka ah caafimaadkeenna?
Berigii hore waxa loo qabay in adeegga caafimaadku masuul ka tahey caafimaadka bukaanka.
Laakiin sannadahan dambe waxa caadi noqotey in qofku isagu ka fekero caafimaadkiisa. Qaabka aynu u doorano nolosheena ayaa qeyb weyn ka qaadata caafimaadkeena. Adeega caafimaadku waxey masuul ka yihiin iney bulshada siiyaan talooyin iyo hagid, laakiin dadweynaha ayaa ka masuul ah qaadashada talooyinkaas. Wey fududahey si loo helo macluumaad ku saabsan sida looga hortago cudurada kala duwan iyo siyaabooyin kala duwan oo cudurada loo daweeyo. Macluumaadka laga helo internetka waxa dheer oo aad macluumaad qoraal ah ka heli kartaa xafiiska dhakhtarka iyo farmasiiga.
Inkasta oo daryeelka bulshadu qeyb weyn ka qaato masuuliyada sidii ey bulshadu u heli lahayd caafimaad wacan, hadana siyaabo badan qofku isaga ama iyada ayey ku xidhantahey sidii uu qofku u dooran lahaa nolosha uu ku noolaan lahaa iyo sida uu caafimaadkiisa u ilaashan lahaa. Dalal badan waxa dadka bukaan socodka ahi u barteen in dhakhtarku awood buuxda u leeyahey inuu qofka u daweyn karo. Waxa kale oo dhici karta inuu bukaan socodku u bartey in aaanuu dhatarka ka tegin dawo la’aan. Laakiin Norwey waa caadi in dhakhtarka iyo qofka bukaa ey ka wada hadlaan fursadaha kala duwan ee daweynta iyo la socoshada.
Caafimaad wanaagsan – ka badan xanuun la’aan?
Dadka qaar waxey odhanayaan in caafimaad wanaagsan macnaheedu yahay inaan la xanuunsanayn. Dadka qaarna waxey odhanayaan caafimaad wanaagsan macnahiisu waa in qofku ku nool yahay nolol wanaagsan oo uu ku qanacsanyahay.
Labadan macnoodba ee lagu micneeyo caafimaad wanaagsan waa sax. Bulshadii cuduro halis ah iyo faqrinimo ay qeyb weyn ka tahay noloshooda, waxaa laga yaabaa in micnaha kowaad uu sax yahay. Bulshadii haysta daawooyin, cudurada oo dhan ay isaga daaweeyaan, haysatana fursad ay ku helaan daryeel caafimaadka muhiimka ah, waxaa laga yabaa in caafimaad wanaagsan inuusan aheyn oo kaliya in qofku xagga jirka iyo maskaxda ka fiyow yahay.
Bulsho-daryeel ujeeddadeedu waa in dhammaan bulshadu ay u noolaato sida u fiican ee suurtogal ah. Tani waxa ay ku saabsan tahay oo kale in caafimaad wanaagsan la helo.
Dawladda-daryeelku waxa ay qaadaysaa masuuliyadda in ay muwaadiniintu heli karaan adeeg-caafimaad iyo in dhammaan daaweynta ay u baahan yihiin iyadoo aan lagu xidhin dhaqaalaha qofka. Sidaa awgeed waxa jira habab dhaqaale oo arrintaas lagu ilaaliyo.
Dhammaan shaqaalaha waaxda caafimaadka waxa saaran waajibka xog-qarinta. Macnaheedu waa in aanay siinayn warbixinta bukaanka cid kale iyada oo aanu oggolaan bukaanka laftiisu oo aanu sidaas aqbalin.